निद्रा बिथोल्ने भेरीले कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ? Setokhari ::. News Portal
शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ ०७:४६:२८
सुर्खेत : घर आँगनमै मौसमअनुसारको बैँस निकाल्ने भेरी नदी एकनासले बगेको छ । कहिले गाउँभरिको निन्द्रा बिथोल्ने सुसाइ त कहिले कहिले शान्तरूपमा बग्ने भेरी नदीले कुदुवासीको तिर्खा भने अहिलेसम्म मेट्न सकेको छैन ।
प्रत्येक दिन भेरी नदीको किनारबाट धमिलो पानी ल्याएर परिवारको तिर्खा मेटाउँदै आएकी काली विक पानीको दुःख हेरेर दिक्क भइसकेको बताउँछन् ।‘स्वास्थ्य सेवा र सडक भएर मात्र के गर्ने ? फोहोर पानी पिउँदा हप्तामा एक पटक आफन्त बिरामी हुन्छन्, जानीजानी फोहोर पानी पिउनै पर्ने बाध्यता छ । वर्षायाम भन्दा हिउँदमा भेरी नदीको पानी सफा हुन्छ, त्यतिबेला सजिलो पनि हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
‘भेरीमै हामीले पानी भरेर लिएको तपाइँहरुले देख्नुभएको छ, फोटो खिच्नुहोस् र नेताहरुलाई जसरी नि देखाउनुहोला’, यो भन्दै गर्दा रविनको अनुहारमा केही आशा र आक्रोश व्यक्त भएको देख्न सकिथ्यो ।‘अझै पनि भेरी नदी सुकेको छैन, केही व्यवस्थापन छिटो गरे अर्को पुस्ताले दुःख नभोगोस्, यही हाम्रो चाहना छ’, उनले भने ।
यही वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नेताहरु केन्द्रीय राजनीतिमा पुगेको भए पनि आफ्नो माग पूरा नहुँदा नमिठो लागेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । कुदुमा पानीको समस्या नौलो नभएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । ‘जुन दिनदेखि यहाँ बस्ती बस्यो सोही दिनदेखि पानीको कुरा उठ्यो तर कहिले सुनुवाइ भएन’, कुदुका शेरबहादुर बस्नेतले भने ।
भेरी नगरपालिकाको रु ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको बोरिङ मेसिनबाट पानी निकाल्ने काम अहिले एक घण्टा पनि सञ्चालन हुन नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । विद्युत आपूर्ति भएमा मात्र सो पानी सञ्चालनमा आउने गर्दछ । एक घण्टा मात्र आउने पानीले कुदुका सर्वसाधारणलाइ छेउ टुप्पो केही नपुग्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । झण्डै २०० घरधुरी रहेको कुदुमा उक्त पानी हातीको मुखमा जिरा भएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । -रासस